Iphume iqholosha itshethe amaphuzu amathathu iTshakhuma kwiMaritzburg - Impempe
Iphume iqholosha itshethe amaphuzu amathathu iTshakhuma kwiMaritzburg
Bekushube kanje oBrandon Theron weTshakhuma Tsha Madzivhandila noTebogo Thlolane weMaritzburg United bebanga ibhola
Kuqhubeke usizi kwiMaritzburg United evele yafana nemoto eyisikorokoro ingasavumi ukuduma ngesikhathi iyeka iTshakhuma Tsha Madzivhandila iyishayele ekhaya ngoLwesihlanu.
ITshakhuma iphume eHarry Gwala Stadium iqholosha itshethe isaka eligcwele amaphuzu amathathu ngemuva kokuqumba phansi iTeam of Choice ngo 1-0 emdlalweni weDStv Premiership.
IMaritzburg iwuqale kahle umdlalo ikhanda amathuba zisuka nje, futhi kusale kancane ilishaye igoli ngomzuzu wesikhombisa, kodwa unozinti weTshakhuma, uWashington Arubi ukhombise ukuphila echitha ibhola likaThabiso Kutumela.
Kuhambe isikhathi wehla kancane umfutho abebehlasela ngawo futhi ubuthuntu phambi kwamapali buhlale obala. Buka nje ngoba ngomzuzu ka-24 bekumele bahambe phambili kodwa kwangenzeka.
UBandile Shandu uphaselwe elihle ibhola elikhiphe wabhekana ngqo no-Arubi kodwa watatazela washaya into ephuphile ayicaphune kalula lonnozinti waseZimbabwe.
Nokho nenhlanhla ngathi belingenayo leli qembu laseMgungundlovu, buka nje okwenzeke ngomzuzu ka-42, ibhola elihle likaKutumela limehlulile u-Arubi kodwa lazishayisa epalini elivundlile (crossbar) qede langaweqa umugqa, labuyela ensimini.
Kuthe sekuzoyiwa ekhefini, uThabo Mnyamane wabeka iVhadu vhaDamani phambili ebeka enethini ibhola kade kuyi-free kick.
Ecikwa abekubona enkundleni, umqeqeshi weMaritzburg, u-Ernst Middendorp wenze izinguquko ezintathu ngemuva kwekhefu, ekhipha oShandu, Moseamedi noDaniel Morgan.
Izindawo zabo zithathwe ngoPhiwayinkosi Zuma, Ali Meza noRiyaaz Ismail. Yize iminyakazo yokuhlasela ibe ngcono ngemuva kwalezi zinguquko, iTeam of Choice iqhubekile nokuxakeka ukuthi yenzenjani uma seyiphambi kwamapali eTTM.
Empeleni kube yiTTM ecishe yathola igoli lesibili njengoba ibifika kuvalwe amehlo emapalini kaMarcel Engelhardt.
IMaritzburg ilitholile elinye ithuba ngomzuzu ka-79, uSibusiso Hlubi ebhekana ngqo no-Arubi kodwa ibhola lakhe laphuma eceleni.
Email: Editor@impempe.com – Twitter: @impempe.com
Previous Previous post: Useyazi kuhle kwentende yesandla i-Al Hilal uRulani weSundowns
Next Next post: Iyaqhubeka nokumangaza i-Arrows eshaye kanzima iStellenbosch